Android Q နှင့် မြန်မာစာ – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
အရင်ဆုံး သိထားရမှာက ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေပေါ်က မြန်မာစာကို ရေးတာနဲ့ ဖတ်တာ ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ခွဲထားပါတယ်။
ဖတ်ဖို့က ZawgyiOne.ttf တို့ Pyidaungsu.ttf တို့လို font ဖိုင်တွေရှိမှ၊ သွင်းထားမှ ဖတ်လို့ရပါမယ်။
ရေးဖို့ကတော့ Frozen တို့ Bagan တို့၊ Manic တို့ GBoard တို့ TTKeyboard တို့လို Keyboard App တွေ လိုပါတယ်။
အခုပြောမယ့် ဟာတွေ ဖတ်ဖို့ သင့်ဆီမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ် ကွာခြားပုံကို အနည်းအကျဉ်း သိထားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အခုတလော ဂယက်ရိုက်နေတာက Android နဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ Android Q မှာ ဇော်ဂျီ အထောက်အပံ့ပေးပြီ ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။
Android Q မှာ ပါတဲ့ ဖောင့်
Android 5.0 (Lollipop) ကနေစပြီးတော့ မြန်မာ ယူနီကုဒ်ဖောင့် တစ်ခုကို Google က သူတို့ကိုယ်တိုင် ရေးပြီး ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Noto Sans Myanmar ဖောင့်ပါ။
အခု Android 10 (Q) မှာတော့ ဘယ်သူ ချွန်လိုက်တယ် မသိ၊ Noto Sans Manmar ZawDecode ဖောင့်ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းပြီး ပါလာပါတယ်။
ZawDecode ဖောင့် ဆိုတာ ဘာလဲ
ဇော်ဒီကုဒ် ဆိုတာ ဇော်ဂျီရော၊ ယူနီကုဒ်ပါ နှစ်မျိုး စလုံးကို တစ်နေရာထဲမှာ၊ ဖောင့်တစ်ခုထဲနဲ့ ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ ဖောင့်ပါ။ သူနဲ့ ဖတ်ရင် ဇော်ဂျီကို ၈၅% မှန်ပြီး ယူနီကုဒ်ကို ၁၀၀% အမှန် မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ Android Q မှာ မြန်မာစာကို ဖတ်ရတာ အနည်းနဲ့ အများတော့ အဆင်ပြေလာကြပါလိမ့်မယ်။
ရေးတဲ့ နေရာမှာ တိုင်ပတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဇော်ဒီကုဒ်ဖောင့်တွေက ယူနီကုဒ်ဖောင့်တွေဖြစ်တဲ့ အတွက် ယူနီကုဒ်နဲ့ ရိုက်မှ အမှန်အတိုင်း ပြပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် ချွန်တဲ့ လူတွေ ရှိသေးတော့ Google ရဲ့ တရားဝင် ကီးဘုတ် ဖြစ်တဲ့ GBoard မှာ ဇော်ဂျီ ရိုက်လို့ ရသွားပါတယ်။ (စာရိုက်ရင် ဇော်ဂျီ စာလုံးတွေ ထုတ်ပေးတာကို ပြောတာပါ။) Frozen တို့ Bagan တို့မှာလည်း ယူနီကုဒ် ရိုက်လို့ရပါတယ်၊ ရွေးချယ်စရာ Option နဲ့ လက်ကွက်တွေ ပေးထားပါတယ်။ GBoard မှာတော့ ရွေးလို့ မရဘဲ၊ စာရိုက်တာနဲ့ ဇော်ဂျီ စာလုံးတွေ ထုတ်ပေးပါတယ်။
ဒီတော့ GBoard နဲ့ Android Q မှာ စာရိုက်ရင် သောက်တလွဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ဒီပြဿနာက ရှင်းရတာလွယ်ပါတယ်၊ GBoard မှာ ဇော်ဂျီ ကို Option တစ်ခု၊ ကီးဘုတ် လက်ကွက် တစ်ခုအနေနဲ့ သီးသန့်ထားလိုက်ရင် ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်း ထွက်မယ့် GBoard update တွေမှာ ဖြေရှင်းလိုက်လို့ ရပါတယ်။
GBoard မသုံးသေးဘဲနဲ့ တခြား ကီးဘုတ်တွေ (Manic, Frozen, Bagan, TTKeyboard, etc.) သုံးပြီး ယူနီကုဒ် လက်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်လို့ရပါတယ်။
GBoard နဲ့ပဲ ရိုက်ချင်သပ ဆိုရင် Font Converter တွေ (Rabbit, MM Font Converter, etc.) ထဲမှာ ဇော်ဂျီ နေရာမှာ ဝင်ပြီး ရေးမယ်ဆိုရင် အမှန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုက Gboard ကို Android Q beta3မှာပါတဲ့ ဟာကို update မလုပ်ပဲသုံးပါ။ ယူနီကုဒ် ရိုက်လို့ရပါတယ်။
အခု အရွေ့ကတော့ အရှေ့ကို နည်းနည်းလေး ရွေ့တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ Facebook ရော Google ရောက သာမန် သုံးစွဲသူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ Font တွေ ကီးဘုတ် တွေ သိစရာ မလိုဘဲ မြန်မာစာကို ဖတ်နိုင်ပြီလို့ ပြောလို့ရအောင် လုပ်နေတာပါ။ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင် အမြင်အရတော့ Facebook သုံးတဲ့ ဖြေရှင်းနည်း (ဘာလာလာ ယူနီကုဒ် ပြောင်း) ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ Google နဲ့ Apple ကိုတော့ နည်းမှန်လမ်းမှန် ချွန်နိုင်တဲ့လူတွေ ရှိရင် အနှေးနဲ့ အမြန် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
MUA တွင် ကိုသီဟအေးကျော် ရေးသောပိုစ်ကို ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
← Previous Previous post: မြန်မာယူနီကုဒ် ခရီးစဉ်
Next → Next post: ယူနီကုဒ်စနစ်သုံး မြန်မာစာစနစ်အား မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားနိုင်ရေးအတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပ